Statement of the Union of Oromo Students in Germany (UOSG): Request for assistances to protect Oromo refugees in Somalia
January 19, 2007 (Germanyt) - The UOSG is founded in 1975 as one of Oromo mass organizations in exile to support the struggle of Oromo people for justice, peace, freedom, democracy, and stability. The struggle of the Oromo people has its root in its resistance to political dominations and economic exploitations by successive regimes in Ethiopia: it is not directed against any people but against the system of oppression. Since its foundation the UOSG has been committed to bring the voices of Oromo people to the attention of the international communities and the democratic governments mainly via the following major activities: organizing peaceful demonstrations, conducting annual seminars, writing appeal letters, publishing annual bulletin, etc. Unfortunately the genuine voice of Oromo people has been silenced by rules of gun under successive tyrannical governances of Ethiopia for more than a century. The UOSG is one of the Oromo people’s mass organizations that have been evolved out of the suppressed voices of the Oromo people.
Labels: Statement of the Union of Oromo Students in Germany (UOSG): Request for assistances to protect Oromo refugees in Somalia
posted by OromiaTimes @ 5:59 PM 0 Comments